Ukuguga - indlela yokubhekana nezinkinga zokuguga?
Umbuzo ngalokho iminyaka yobudala bomuntu ukuze kubhekwe ubudala, emphakathini wanamuhla uya liphuma. Intsha akazange anqikaze baphathe kulesi sigaba zabo bonke abaye attained ubudala 25. Futhi abaqashi cabanga unpromising labo babe eminyakeni engaphezu kuka-40.
Yiziphi imingcele asebekhulile? Futhi kwenzeka kanjani ukuba umphakathi kufanele ezihlobene nokuguga?
Phakathi kwabantu abaningi kukhona nombono wokuthi ukuguga okwenza umuntu athambekele kakhulu izingozi, libonisa abampofu yokufunda into entsha futhi lokukhohlwa. Kodwa ingabe kunjalo?
Amaqiniso ukukhuluma ephambene. wilting Esheshayo kwenzeka kumuntu oneminyaka ephakathi kuka-30 no-40 iminyaka. Njalo lwesithathu, owabulawa engozini yemoto - ke insizwa engu-25. Abukho ubufakazi obungokwesayensi ubuchopho amadala umuntu enempilo ziyancipha, alikho. Lo mbono wokuthi ukuguga nokugula konke kuyahambisana, akulona iqiniso - abantu abaningi ababhekene ukuguga engconywana futhi, ngaphezu kwalokho, abazibheki ubudala.
Siyakubona lokho emphakathini wanamuhla "bonkers" ngoba ubusha nobungqabavu abezindaba asebekhulile kabi. Phakathi ithelevishini ehola ngeke uthole umuntu osekhulile. Esikubonayo indida: akukaze kwenzeke emlandweni wesintu engakaze lukhulu kangaka ukuvikelwa komphakathi kanye nezomnotho amalungu omphakathi abe yokuguga. Nokho, imicabango yabantu ngazo emphakathini alivumi kakhulu.
Abantu abadala babandlululwa. Odokotela zikholelwa ukuthi ngemva kweminyaka engu-65 izinyathelo isicelo ngasekupheleni nabantu isifo amadala okukhulunywe izifo njengoba senile, ngokwenqaba kunakekelwa ngetemphilo letisezingeni lelifanele. Amadoda amadala basolwa eziwabambayo i Ingxenye ngokweqile imali eyabelwa ukunakekelwa kwezempilo. Kanye inombolo enkulu impesheni emazweni ehlukene ibizwa ngokuthi imbangela izinkinga zomnotho. "Ubumpunga Wave" libhekisela ukuguga izici, ubona, ayiyinhle kakhulu.
abantu usizo oluyigugu amadala
Uzenzela isinqumo: ngokwezazi zezenhlalo, amalungu amaningi amadala emphakathini ube nokuchuma okukhulu futhi ukuzimela kwezomnotho kuka imibhanqwana esemisha, ikakhulukazi emazweni asethuthukile. Lokhu kuwenza lamakhasimende akahle kakhulu, sithonye omuhle emnothweni lamazwe abo.
Ingxenye yesithathu yabo bonke abesifazane abasebenza ukushiya izingane zabo ukuba zinakekelwe ogogo nomkhulu, ngubani, kulinganiselwa ukuthi ingxenye yazo zonke umsebenzi eyenziwa ekunakekeleni ingane.
Kubantu abaningi, esegugile uma hhayi isithiyo, ukufunda ikhompyutha nezinye izindaba ubuchwepheshe. Bathanda ukufunda nokudlulisa isipiliyoni sabo ukuze basize abanye.
Futhi hamba ngeholide enqaba ezandayo abantu umhlalaphansi.
Siqhubeke sizama ukuphila okumatasa
Ukuguga - lokhu akusona isithiyo yokuthola ukuphila okujabulisayo. Bonke abantu asebekhulile babe ngento eyodwa: basuke batibandzakanye yimuphi umsebenzi ewusizo, kungakhathaliseki ukuthi ikhokhwe umsebenzi, kungakhathaliseki ukuthi umshikashika yokuzithandela.
Qhubeka ukuze uhlale usebenza, ukwenza umsebenzi, izithakazelo zabanye abantu babo bonke ubudala futhi ukwanelisa izidingo zabo ezingokomoya.
Zama ukubheka izwe lula futhi ukuletha ekuphileni ukwehluka.
Lalela iseluleko-World Health Organization, okuyinto kuyoba usizo for abasha nabadala: "Kwenzeka kanjani impilo yakho ikhuthaza umzimba nokwaneliseka ekuphileni asebenzayo inikeza ithuba elihle kakhulu ukulondoloza impilo."
Ikhono bajabulele ukuphila ukuguga kungaba ngezinga elithile kuthinte imicabango yabantu eyayivela abanye, kodwa ungakhohlwa ukuthi injabulo kunqunywa emehlweni akhe ikhehla ekuphileni kwakhe.
Stroke - ohlangothini lwesokudla ikhubazeke.
Stroke - Izimpawu kanye Ukwelashwa Izindlela
Ukunconywa ngoba umama: amathiphu, iseluleko
Umuthi 'Carboplatin ": yokusetshenziswa, analogs kanye nokubuyekeza
Tablets "Tsetrin": lokho, indlela yokwenza, ukubuyekezwa
Indlela Bala wiretapping nokuthi ukusebenza Antizhuchok?
Utshwala: Uhlu ngohlobo
Indlela yokwelula into uvolo, uma ehlezi ukugeza?
"Pyrogenalum": ukubuyekezwa kanye analogue